War murtiyeed laga soo saarayo wada hadalada u socda Madaxweynayaasha Somalia iyo Kenya : SomaliPress.tv
Labada Madaxweyne ayaa shalay isla gartay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal, xoojinta dhinaca iskaashiga, Ammaanka iyo arrimaha qaxootiga.
Kulankii shalay ayaa la sheegay inay jireen waxyaabo ay isku fahmi waayeen oo la xiriiray arrinta qaxootiga oo dowladda Kenya ku doodeyso inay gebi ahaanba xireyso, halka dowladda Soomaaliya ay qabto tallaabo taas ka duwan.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka dalbaday Madaxweyne Uhuru Kenyatta in la fududeeyo isu socodka labada dal, gaar ahaan dhinaca duulimaadyada, iyadoo la isla gartay in diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya hal jeer lagu baaro Wajer, oo aan Nairobi lagu baarin mar kale, waxaana la filayaa in mustaqbalka ay bilowdaan duulimaadyo toos ah.
War murtiyeedka ay so saari doonaa Labada Madaxweyne ayay wadajir u saxiixi doonaan, waxaana laga dhursugayaa sida ay iskula fahmaan arrimaha qaxootiga oo Kenya ay ku adkeysaneyso in dhamaadka sanadkan inay xireyso xeryaha qaxootiga.
« Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf: ” Dhammaan Ciidamada AMISOM sharci darro ayey ku joogaan dalka
Diyaaradda EgyptAir oo si deg deg ah looga dejiyay Uzbekistan kadib markii looga shakiyay in bom uu saaran yahay »